Munaasabad Ka Dhacday Xafiiska Waxbarashada DDSI - Cakaara News
Munaasabad Ka Dhacday Xafiiska Waxbarashada DDSI
Jigjiga(CN) Khamiis, 21 January 2016, Munaasabad uu soo agaasimay Xafiiska Waxbarashada DDSI islamarkaana shaqaalaha xafiiska lagu gudoonsiiyay shahaado sharaf iyo karaka boondhiga biya xidheenka wabiga abay ayaa saaka ka qabsoomay guriga shirarka ee isla Xafiiska Waxbarashada.
Munaasabadan oo ay kasoo qayabgaleen Agaasimada,khabiirada,iyo dhamaan shaqaalaha Xafiiska Waxbarashada heerdegaan ayaa waxaa ugu horayn furay madaxwayne ku xigeenka ahna wasiirka waxbarashada mudane Mowliid Hayir Xasan isagoo sheegay in ka qayb qaadashada biyo xidheenka wayn ee Wabiga Abay ay idiin leedahay laba fa iido mida kobaad waxaad ka qayb qaadateen howl qaran mida kalena waa idinkoo heli doona lacagtiiniini. Sidoo kale waxa uu madaxwayne ku xigeenku uu abaalmarino shahaado sharaf ah gudoonsiyaay xubnihii hormuud ka noqday kooxihii ukala baxay gobalada iyo dagmooyinka ee ahaa abaabulka waxbarashada.
Ugu danbayna waxa uu Madaxwayne Kuxigeenku ku amaanay shaqaalaha xafiiska waxbarashada ka qayb qaadashada biyo xidheenka wayn ee wabiga abay iyo xubnihii hormuudka noqday isagoo shegay inay dadaalkoda sii wadaan kuwa kalana ay ku daydaan xubnaha hormuudka noqday. Dhanka kale waxaa iyana dareenkoda ka hadlay qaar ka mid ah shaqaalaha xafiiska waxbarashada iyagoo sheegay inay aad ugu faraxsanyihiin ka qayb qaadashada biyo xidheenka iyo abaal marintan la gudoon siiyay